प्रेमलाई मलजल गरी हुर्काउने १० तरिका | Nepali Virals
प्रेमलाई मलजल गरी हुर्काउने १० तरिका
फेब 28, 2016 | प्र्यांक |0comments
प्रेम एउटा आश्चर्यजनक अनुभव हो । बिश्वमा यो एउटा मात्रै यस्तो अनुभुति हो जसले तपाईलाई सदैव खुसी दिन्छ । तपाई आफ्नो प्रियसीसँग कसरी मायाँ साट्नु हुन्छ ? तपाई आफ्नो पार्टनरबाट न्यानो मायाँ चाहनु हुन्छ भने तपाई आफूले पनि न्यानो मायाँ दिन सक्नु पर्छ । प्रेम गर्न कसैले सिकाई राख्नु पर्दैन तर स्मरणीय कुरा के पनि हो भने प्रेम गरेर मात्रै हुदैन, प्रेम गर्ने तरिका पनि प्रेमिल हुनुपर्छ । जसले तपाईहरुको प्रेममा सुगन्ध थप्ने काम गर्छ । प्रमिल प्रेमले नै तपाईहरुबीच सम्वन्ध चरमविन्दु कायम रहन्छ । अर्थात एकअर्काको मायाँ घटेको होईन बढेको आभास हुन्छ । यहाँ हामीले पार्टनरलाई प्रेम गर्ने १० तरिका प्रस्तुत गरेका छौ जसले तपाईहरुबीचको सम्वन्ध सदावहार प्रेमिल बन्न सघाउने छ ।
१. सँगै बसेर सुर्यास्तको दृश्य हेर्नुहोस्
सूर्यास्तको मनोरम दृश्य निकै रोमाञ्चक हुने गर्छ । आप्mनो पार्टनरसँग बसेर यो दृश्यको अवलोकन गर्नुहोस् । अनि दुवै जना त्यसलाई हेरेर मायाँ दर्शाउनुहोस् । तपाईहरुको प्रमिल संसार बेग्लै संसारमा पुगेको अनुभूति हुनेछ ।
२. संगै नुहाउनुहोस्
के तपाई आफ्नो प्रियसीसँग सँगै नुहाउनु भएको छ ? छैन भने अब कोसिस गर्नुहोस् । यसले तपाईहरु बीचको प्रेम हुर्काउन मसलाको काम गर्ने छ । सँगै वाथरुम जानुहोस, केही क्यान्डल बाल्नुहोस्, बत्ती निभाउनुहोस् अनि शावर खोल्नुहोस् । त्यसपछि प्रेमिल संसारमा चुर्लुम्म डुबेर मज्जा लिनुहोस् ।
३. पानी पर्दा बाहिर निस्किने
प्रेमलाई मलजल गर्ने अर्काे रोमान्टिक तरिका हो पानी परिरहँदा दुवै सँगै निस्किने । अझ सिमसिम पानी परिरहेको मौषम झन उपयुक्त हुन्छ । यस्तो मौसम प्रेम जोडीहरुका लागि त्यसै पनि रोमान्टिक हुन्छ । यस्तो बेलामा निस्किेर डेटिङ जानु र हल्का पानीमा भिज्ने र अंगालोमा बेरिएर किस गर्ने । यसो गर्दा प्रेमको बेग्लै अनूभुति हुनेछ ।
४. सँगै डान्स गर्ने
पार्टनरसँग सँगै डान्स गरेर पनि प्रेमलाई हुर्काउन सकिन्छ । पालैपालौ एकअर्काको मन पर्ने म्यूजिकमा डान्स गरेर प्रेम दर्शाउन सकिन्छ । अझ हरेह दिन बेडरुपमा यस्तो अभ्यास गर्न सके निकै राम्रो हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
५. एकअर्काका लागि उपहार
उपहार आदानप्रदान गर्नु प्रेम र सम्झौताको पहिचान हो । विशेष अवसरहरु जस्ते वर्थ डे, एनिभर्सरी, भ्यालेन्टाइन डे लगायतका अवसरहरु र अन्य चाडपर्वहरुमा एकअर्कालाई गिप्mट दिनुहोस् । यसले एकअर्कालाई गर्ने मायाँको मात्रा बढेको आभास हुनुका साथै बिश्वास पनि बढ्छ । अझ सरप्राइज गिप्mट दिन सके त तपाईहरुको जिवनमा सुनमाथि सुगन्ध भै हाल्यो ।
६.एकअर्काको सिधा आँखामा हेर्ने
धेरै पार्टनरहरुलाई यो कुरा हेक्का हुदैन । एक पटक आप्mनो पार्टनरको आँखामा हेरेर आइ लभ यू भनेर हेर्नुहोस् । तपाईको प्रियसी तपाईसँग लपक्कै तासिने छ । र तपाईहरुबीचको सम्वन्ध थप उचाईमा पुग्ने छ ।
७. सँगै बसेर रोमान्टिक मुभी हेर्ने
सँगै बसेर रोमान्टिक मुभी हेर्दा पनि प्रेम बढ्ने गर्छ । मूभिको कथा वस्तु आफ्रनौ प्रियसीलाई व्यवहार गर्दा सुख, दुःख, माँया वुभ्mने बुझाउने मौका मिल्छ ।
मालिस अर्थात मसाजलाई शारीरिक तथा मानसिक सन्तुलन र स्वस्थताका लागि औषधि मानिन्छ । पार्टनरहरु बीच एक अर्काले अर्कोलाई मालिस गरिदिएर प्रेम व्यक्त गर्न सकिन्छ
९. सँगै पकाउनुहोस
तपाईको पार्टनर किचेनमा हुँदा तपाई पनि सघाउन जानुहोस् । यसले तपाईको प्रियसीको मनमा तपाईप्रति सहयोगी भाव उत्पन्न हुन जान्छ । अझ तपाईको प्रियसी किचेनमा काम गरिरँदा पछाडिबाट गएर च्याप्प अंगालो मार्नुहोस् । तपाईले अनौठो प्रतिक्रिया पाउनु हुनेछ । जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि तपाईको पार्टनर रोमान्टिक हुनेछन् । अझ आप्mनो हातले नौलो परिकार बनाएर ख्वाउन सके थप रमाईलो हुनेछ ।
प्रेम हुर्काउने अमृत हो- ख्यालठट्टा । त्यसैले स्वभाविक र कहिलेकाही अनौठो ख्यालठट्टा पनि जरुरी हुन्छ । जसले तपाईहरुबीचको सम्वन्ध थप घनिष्ठ बन्ने छ ।
छानादेखि खानासम्म उल्टो ! यो कस्तो अनौठो घर ? (हेर्नुहोस् फोटोफिचर)